ए ससुरा बा ! मलाई देवर मन पर्‍यो - Baikalpikkhabar
निरन्तरको लामो बसाइले लोग्ने र स्वास्नीका यौन रोमाञ्चकतामा ह्रास आउनु स्वाभाविकै हो। तर लोग्नेले स्वास्नी छाडेर साली ताकेजस्तै यौन रोमाञ्चकताका लागि स्वास्नीले पनि देवर ताक्न थालिन् भने यो शान्त र सुन्दर कुवामा कस्तो तरंग आउला? त्यसरी सोच्न मिल्ला ?
साँच्चै, यिनै शब्द हामीले सुरिलो स्वर र मधुर संगीतमा गीत बनाउने हो भने सुपरहिट बनेर नेपाली बजारमा सर्वप्रिय होला या नहोला? अनि यसमा लोग्ने र सासू-ससुराहरूले आफ्ना भाइ र स्वास्नी सँगसँगै चम्कीचम्की नाचेको दृश्य निर्धक्क स्वीकार्न सक्लान्? देवरसँग भाउजू नाच्ने कुरा सम्झिँदा तपाईंलाई दिगमिग लाग्छ भने स्त्रीलाई अनेक रूपमा ‘कमजोर र केवल भोग्या’ ठान्ने परम्परागत रुग्ण धारणा त्याग्न तयार हुनुहुन्छ त? एकलकाटे र स्त्रीभोग्या समाजका भाष्य भत्काउन तयार हुनुहुन्छ ?
यो विचार नेपाल खवरबाट साभार गरिएको हो ।
बुधबार, ०६ साउन, २०७८, दिउँसोको ०४:१५ बजे